Malunga nathi-umenzi weSanda kunye nomthengisi
Elungiselelweyo Vulcanized ngerabha Izahlulo Ukubunjwa
I-Hangzhou Sanda irabha kunye neplastiki yezixhobo zehardware Co., Ltd.yasekwa ngo-1998. Ifumaneka eZhejiang, China.Sizinikela kuphando, kwimveliso kunye nasekuthengiseni kwi-EPDM, irabha yeNeoprene (CR), i-NR, i-PVC, i-NBR, i-TPE, irabha yesilic kunye neplastiki, kunye nezinye iimveliso, ezijolise ikakhulu kwimisebenzi emibini esisiseko. Ukutywina kunye nokothuka absoption.
I-SANDA ibonelela ngerabha yesiqhelo kunye nokutywina kweplastiki kunye nezisombululo zetyhubhu kwizicelo ezahlukeneyo. Sisebenza kunye nabathengi ukumisela ezona zisombululo zibalaseleyo zokubonelela ngeempawu ezisemgangathweni ezinamandla kunye neetyhubhu eziyilelwe ukujongana nemozulu embi, ingxolo egqithisileyo, ukungcangcazela okungafunekiyo kunye neminye imiba.
Iimveliso zethu eziphambili ziiNxalenye zerabha yesiqhelo kunye neemveliso zerabha esemgangathweni. Iimveliso zethu ezisetyenziswa kakhulu koomatshini, imoto, petrochemical, eyama, zonyango, ukutya, wokhuselo lwesizwe kunye noshishino emkhosini. Sakhe intsebenziswano yexesha elide kunye neDupont, iDow Corning, inkampani yaseSolvay, yeJSR, ukubonelelwa okuzinzileyo kwezixhobo kuyaqinisekiswa. Ngapha koko, sinelebhu yethu yemveliso eluhlaza, iifomula ezifanelekileyo zinokuphuhliswa ngokwemeko yokusebenza yabathengi. Kuba, iteknoloji inzuzo. Sineqela lobuchwephesha, iinjineli zethu zingacebisa ubungakanani ngokokusebenzisa, zoba imizobo ngokweesampulu, nditsho nokunceda ukuyila. I-OEM kunye ne-ODM zamkelekile.
Iimveliso zethu eziphambili ziCustomized rubber vulcanized parts zerabha, mulch, itywina yerabha kunye nerabha gasket irabha o isangqa, irabha sheet, irabha grommet, irabha lokumisa, iinyawo zerabha, irabha ikepusi, irabha matting, irabha bumper, isiciko irabha uthuli, NBR irabha umbhobho, abicah ithumbu , Iimveliso zerabha zesilicone. imitya yetywina yerabha ekhutshelweyo, imitya yokutywina ye-PVC, imitya yokutywina ye-EPDM, imitya yokutywina i-Silicone. oonogada abasemacaleni , Isithinteli serabha sendalo. Imvuthuluka yerabha, iibhutsi zothuli, iibheringi zebhulorho, irabha zokulinganisa kunye neemveliso zeplastiki, njl.
Iimveliso zethu zithunyelwa kumazwe amaninzi kunye nemimandla, ezifana USA, eJamani, Canada, Saudi Arabia, UAE, Italy, Belgium, Philipines, Poland ,, Russia, Ecuador, Brazil, Austrialia, Spain, Israel, njl
Sinethemba lokuba siza kusebenzisana nawe
1 .Kungcono ukuba usithumelele umzobo wakho kuqala, njengoko uninzi lweemveliso zethu zilungiselelwe wena.
2. Nceda wazise ngendawo osebenza kuyo kunye nezinye iimfuno zakho (umz. Ubukhulu, imathiriyeli, ubunzima, umbala, ukunyamezelana, njl Ngokucaphula ixabiso elifanelekileyo)
3. Ixabiso elifanelekileyo liya kucatshulwa emva kokuqinisekiswa kweenkcukacha.
4. Phambi kokuba kwenziwe imveliso ngobuninzi, isampulu yokukhangela kufuneka ukuba uqinisekise ukuba yonke into ihamba kakuhle ngokomgangatho wakho.
I-Hangzhou Sanda Rubber kunye neplastiki yehardware Co., Ltd. eyasekwa ngo-1998.
Lwedilesi: Room523, buliding 1, NO.230 Shiqiao Road Xiacheng District Hangzhou, Zhejiang, China
© Copyright - 2010-2021: Onke amalungelo agciniwe.